Ụzọ abụọ iji nweta album artwork on iTunes
The ụzọ na-Album osise na iTunes
Efu artwork bụ nnọọ mgbakasi n'anya maka-achọkarị izu okè dị ka m na-achọ ha music n'ọbá akwụkwọ na-ọma haziri mgbe niile. Ọ bụ n'ezie a na-emenye ụjọ n'anya mgbe ọkara gị tracks na-efu ha na nwoke artwork. Bụghị nanị na ha ka gị ọbá akwụkwọ anya aesthetically wetara kamakwa unorganized na-eru unyi.
E nwere ụzọ iji weghachite efu artwork si iTunes; akpaka usoro na ntuziaka usoro.
1. The Automatic Method nke-ewepụta na-efu Album osise.
2. The Method nke Iji aka-ewepụta, na-efu osise.
3. The Mfe Method nke na-efu efu Album osise
Banye na gị iTunes Store eji gị Apple ID. Ọ bụrụ na ị na-ama banyere, na nanị na-emeghe iTunes.
Họrọ niile nke gị ọdịyo faịlụ site ma na-ejide Mgbanwe isi mgbe ị pịa ọ bụla faịlụ n'otu n'otu ma ọ site na iji Ctrl + A.
Ugbu a nri pịa, na site na dropdown menu họrọ "Get Album osise".
Nọdụ ala azụ ma zuru ike, iTunes ga-akpaghị aka na-amalite na-achọ na-ewepụta na-efu album artwork.
Ozugbo akpaka nlaghachie usoro zuru ezu, ị ga-enweta a ngosi na-agwa gị ya. Ọ bụrụ na n'ụzọ ụfọdụ ụfọdụ n'ime artwork-apụghị Ewepụtara (na e bụ oké ohere ọ ga-eme), ị ga--amara gị ọkwa ya.
Lee maka artworks on Google maka iche albums / tracks.
Zọpụta oyiyi ke chọrọ ọnọdụ nke kọmputa gị / laptọọpụ.
Open iTunes, họrọ song nke ị chọrọ ka ịgbakwunye artwork, nri pịa na ya na site dropdown menu họrọ, "Nweta Info".
A ọhụrụ na ihuenyo ga-emeghe elu, gaa na taabụ kpọrọ "osise" na pịa "Tinye". Agagharị aka ịchọta ezi oyiyi na pịa "Open". Pịa "Ok" ka ịgbakwunye artwork na faịlụ na ị họrọ.
Ugbu a, i nwere ike chọpụtara na ma ndị a ụzọ nwere ụfọdụ dị oké njọ ọghọm dị ka:
1. The akpaka nlaghachie ọtụtụ mgbe, ada ada iji weghachite niile nke efu artwork.
2. Na ntuziaka nlaghachie, i nwere anya n'ihi na onye ọ bụla nke na-efu sere ese onwe gị, ịzọpụta ya na kọmputa gị / laptọọpụ na mgbe ahụ na-eso a cumbersome usoro nke na-agbakwunye ya n'otu n'otu ka chọrọ ọdịyo faịlụ.
TunesGo bụ ihe dị mfe na fun iTunes njikwa na-ahapụ gị jikwaa niile nke gị iTunes data gafee niile nke ngwaọrụ gị (iPads, iPhones wdg) na-enweghị na-aga site iTunes oge ọ bụla. Ọzọkwa, ọ na-enyere ahazi gị iTunes n'ọbá akwụkwọ site scanning nke na-efu album artwork, efu mkpado, oyiri songs na-efu tracks wdg na fixes ọ na-akpaghị aka na click nke a otu bọtịnụ. Ọ nwekwara ike iji ihe ndabere gị data, jikwaa kọntaktị gị ma nyefee foto site na otu apple ngwaọrụ ọzọ. Ọ bụ dakọtara na Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS X, iOS 9 nakwa dị ka Android na Windows igwe.
Ka ibudata TunesGo, na-aga http://www.wondershare.com/tunesgo/, ị nwere ike ibudata ikpe mbipute na-enwechaghị atụmatụ ma ọ bụ ị nwere ike ibudata ugwo adịchaghị version maka naanị $35.95.
Mgbe nbudata na na na wụnye TunesGo, emeghe iTunes na TunesGo ama meghere na site na ihe mmịfe menu na ala nke window họrọ "Hichaa iTunes Library".
TunesGo ga-amalite ịgụ isiokwu gị ọbá akwụkwọ nke na-efu ọmụma na-ewetara ndị stats. Họrọ "Clean Up".
Ọ bụrụ na ị na-ekpe ikpe version,-awụ ọsọ n'ugwu Go ga-enwe ike iji weghachite efu album artwork na ya mere ga-ajụ gị ka ị na-azụ ihe adịchaghị version. Ọ bụrụ na Otú ọ dị, ị na-eji adịchaghị version, ndị na-esonụ window ga-eso:
Ugbu a, anyị pụrụ iji tụnyere atọ Filiks tụlere n'elu ie akpaka artwork nlaghachie iji iTunes, akwụkwọ ntuziaka artwork nlaghachie iji iTunes na artwork nlaghachie iji iTunes na ọ bụ doro anya na nke ikpeazụ bụghị nanị dị mfe ma na-erughị-ewe oge. Ị pụrụ iji na-aga n'ihu ma na-na adịchaghị version ugbu a na ị na hụrụ otú bara uru TunesGo pro bụ!
> Resource> iTunes> The ụzọ na-album artwork on iTunes